Ithegi: ayifumaneki | Martech Zone
Yintoni iPhepha leMpazamo engama-404? Kutheni zibaluleke kangaka?
NgoLwesithathu, Matshi 24, 2021 Lwesine, Matshi 25, 2021 Douglas Karr
Xa usenza isicelo sedilesi kwisikhangeli, uthotho lweziganeko zenzeka kumcimbi wee-microseconds: Uchwetheza idilesi nge-http okanye i-https kwaye ungene kwi-Enter. I-http imele umgaqo wokudluliswa komxholo kwaye ihanjiswe kwigama ledomain server. I-Https liqhagamshelo elikhuselekileyo apho umphathi kunye nesikhangeli benza ukuxhawula kwaye bathumele idatha ebhaliweyo. Umncedisi wegama lesizinda ujonge phezulu apho i-domain ikhomba khona
NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2021 NgoLwesithathu, Matshi 24, 2021 Douglas Karr
Sinomthengi okwangoku isikhundla sakhe sithathe idiphu kungekudala. Njengoko siqhubeka ukubanceda ukulungisa iimpazamo ezibhalwe kwiGoogle Search Console, enye yemicimbi ebengezelayo ziimpazamo ezingama-404 ezingafunyenwanga. Njengoko iinkampani zifudusa iisayithi, amaxesha amaninzi zibeka izakhiwo ze-URL endaweni yazo kwaye amaphepha amadala ebekade engekho awasekho. Le yingxaki enkulu xa kuziwa ekusebenziseni i-injini yokukhangela. Igunya lakho
NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Iwebhu ihlala ihamba kwaye iyatshintsha. Iindawo ziyavalwa, zithengiswe, zifuduswe, kwaye ziphuculwe ngalo lonke ixesha. Indawo efana neMartech iqokelele ngaphezulu kwama-40,000 amakhonkco aphumayo kwindawo yethu ebomini bayo… kodwa uninzi lwala makhonkco awasasebenzi. Le yingxaki yezizathu ezimbalwa: Izixhobo zangaphakathi ezinjengeemifanekiso ezingasafumanekiyo zinokucothisa ukulayishwa kwephepha. Amaxesha okulayisha iphepha anefuthe lokuhla kwamandla, ukuguqulwa kunye nenjini yokukhangela